Ny marketing dia tonga Lynchpin an'ny fahombiazan'ny Cross-Functional amin'ny orinasa | Martech Zone
Ny marketing dia tonga Lynchpin an'ny fahombiazan'ny Cross-Functional amin'ny orinasa
Talata, Oktobra 30, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Sarotra ny mamantatra hoe inona amin'ny asako no nanomana ahy hahita fahombiazana. Fony aho tany amin'ny Tafika an-dranomasina, raha mbola Elektrisianina ofisialy aho, amin'ny maha injeniera ahy dia mpamono afo efa ela koa aho. Voatendry ihany koa aho ESWS, mari-pahaizana manokana momba ny ady an-tany izay nanome ahy topy maso ny asa sy ny rafitra rehetra ato amin'ny sambo. Io fahalalana sy traikefa niampita asa io no fototry ny zavatra niainako tamin'ny fahaiza-mitarika.
Taorian'ny tafika an-dranomasina dia niasa tamin'ny gazety elektrisianina tamin'ny indostria aho. Ny fahafahako mianatra sy miasa miampita asa dia nanjary fampiroboroboana voalohany. Raha vantany vao nitantana ny hafa aho dia nanambola be ny orinasa tamin'ny fampandrosoana ahy, nametraka ahy tamin'ny alàlan'ny fampiofanana orinasa avy amin'ny fiofanana momba ny maha-olona, ​​ny teti-bolan'ny orinasa, ny coaching, ny fampandrosoana tsy tapaka, ary ny programa fitantanana sy fitarihana hafa. Afaka niova moramora tamin'ny toeran'ny mpanara-maso sy mpandalina aho, avy eo lasa amin'ny marketing amin'ny tahiry.
Nandritra ny roapolo taona dia niasa tamin'ny toeran'ny mpitarika marketing sy ny mpitantana manerana ny firenena aho. Roapolo taona lasa izay, matetika ny sehatry ny asako dia ao amin'ny departemantan'ny marketing, fa izao dia mihaona amin'ny mpitarika zokiolona mihoatra ny taloha aho. Ny anton'izany dia ny marketing nomerika dia nanjary tondro azo antoka sy mpilaza mialoha ny fahombiazan'ny orinasa.
Roapolo taona lasa izay, ny marketing dia tetikady iray tokana nametrahana marika sy fampielezan-kevitra ary avy eo nandrefy ny valiny nandritra ny taona maro. ankehitriny, amin'ny fotoana katroka Ny fikarohana sy ny angon-drakitra momba ny varotra dia mampiharihary ny fahombiazan'ny mari-pamantarana rehetra mahomby amin'ny fikambanana - na ny fahafaham-pon'ny mpiasa, ny fitazonana ny mpanjifa, ny toeran'ny mpifaninana, sns. Noho io antony io dia mihamaro ny orinasa manakarama fitarihana zokiolona ary mampihatra ny anjara asan'ny mpitarika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. ezaky ny marketing.
Mitombo isa ny manam-pahaizana momba ny fitantanana fikambanana mampiroborobo ny fampiasana ny fidirana amin'ny cross-functional ao anatin'ny orinasa. Na dia mitaky fandaminana sy famerenana andraikitra indray aza ny fisafidianana ny handray an'io endrika ambaratongam-pahefana io, ny fampiharana ny fidirana amin'ny cross-functional dia valiny mety amin'ny fitomboan'ny tahirin-kevitra lehibe sy ny fironana vao haingana.
Ahoana no ahafahan'ny orinasa mahatratra fampifangaroana miampita asa
Ny fampidirana Core to cross-functional dia ny fanaparitahana ny silo ary fananganana empira ao anatin'ny fikambanana. Ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahasalama dia tsy misy fitiavan-tena ny mpitarika - miaiky fa ny fahafoizan-tena natao tao amin'ny departemantan'izy ireo manokana dia mety hitarika amin'ny fanatsarana ankapobeny ny fahasalaman'ny orinasa. Nifanakalo hevitra tam-pahatokisana tamin'ireo orinasa aho ary niresaka azy ireo fampidinana ny fandaniana amin'ny marketing dizitaly rehefa tsikaritray fa nahavita tsaratsara kokoa ny loharanom-barotra hafa. Matetika izy io dia natao noho ny fahaverezan'ny masoivohako manokana - saingy izany no zavatra mety tokony hatao amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa.
Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsy miasa, ny mpitondra tsirairay dia miady amin'ny fampitomboana ny vidin'ny lohan'izy ireo, ny fampitomboana ny fandaniana amin'ny teti-bola ary heverin'izy ireo ho toy ny ivon'ny fandaminana izy ireo. Fotoana niainan'izy ireo izao satria tsy maintsy miaina sy miroborobo ny sampana tsirairay. Maty ny fivoaran'ny vokatra sy ny fanavaozana, manimba ny varotra sy ny fihazonana amin'ny ho avy. Ny ezaky ny varotra sy ny varotra dia tsy mahavita araka izay tratry ny ananany. Tapaho ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny lazanao amin'ny Internet noho ny tombom-barotra amin'ny orinasa misy anao. Miala tombony ary miala amin'ny orinasa ny talentanao.
Ny statistika dia manohana ny fampifangaroana azy ireo:
Ireo orinasa manao fanadihadiana ny mombamomba ny mpanjifa dia mitombo haingana kokoa
Ireo fikambanana izay mizara ny andraikiny amin'ny marketing amin'ny ekipa dia matetika manana tetika marketing izay miray kokoa amin'ny ankapobeny ny paikadin'ny orinasa amin'ny ankapobeny
Ny fampidirana cross-functional dia ahafahana maodely voarafitra ho an'ny hery-miasa izay mety ho mailaka rehefa voatendry amin'ny tetikasa
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny marketingo dia mihatsara miaraka amin'ny fahitana sy ny fiantraikany manerana ny fikambanana, ary ny sampan-draharaha hafa dia mihatsara miaraka amin'ny fahitana ny zava-bita amin'ny marketing amin'ny ankapobeny. Tsy ny marketing no mitarika fa ny marketing tafiditra ao anatin'ny fikambanana.
Sarotra ny fampidirana cross-functional, ary ny antontan'isa koa dia mampiseho fa misy taha-pahombiazana avo lenta ihany koa mifandraika amin'ny tsy fampiharana tsara. Raha te hahalala bebe kokoa dia zahao ny sary eto ambany noforonin'ny New Jersey Institute of Technology's Tompon'ny fandraharahana amin'ny Internet programa fianarana.